प्रधानमन्त्री ज्यू, बालुवाटारबाटै साझा बसको यात्रा गर्ने कि ? « Pahilo News
प्रधानमन्त्री ज्यू, बालुवाटारबाटै साझा बसको यात्रा गर्ने कि ?
प्रकाशित मिति : 27 November, 2016 12:47 pm
१२ मंसिर । कुनै समय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको ‘बसमा जो पनि चड्दछ किलिण्डरले दुई रुपैयाँ टिकट काट्दछ’ भन्ने गीत निकै चर्चित थियो । आइतबार धेरैले विर्सिसकेको त्यो गीतको झल्को दिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ।
पुल्चोकबाट दैनिक दर्जनौँ पटक झण्डावाल गाडी ओहोर–दोहोर गर्छन । मन्त्री निवास नै पुल्चोक भएपछि ती दृष्य कुनै नौलो भएनन् । तर, आइतबार भने त्यही पुल्चोकदेखि प्रधानमन्त्री नै साझा बसमा चढेर सिंहदरबारसम्म यात्रा गरेको दृष्य निकै रोचक बन्यो ।
कुनै समय साझा बसको निकै चर्चा थियो । कलाकार मदनकृष्ण र हरिवंशले पनि साझा बसलाई नै आधार बनाएर गीत गाएका थिए । बीचमा लामो समय जनताले ती बसको यात्रा गर्न पाएनन् । केही वर्ष अघि मात्र साझाले नयाँ ढंगले बस सञ्चालनमा ल्याएपछि फेरि जनताले साझाको यात्रा गर्न पाएका छन् । साझाले ल्याएको नयाँ ३० वटा बसको औपचारिक उद्घाटन प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले गरे ।
त्यतिपछि उनीसँगै मन्त्रीहरुले पनि साझा बस चढेर सिंहदवारसम्म यात्रा गरे । प्रधानमन्त्री नै साझा बसमा चढेपछि अहिले थप चर्चा भएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटनका लागि मात्र होइन सुविधा सम्पन्न गाडीको यात्रा छाडेर बालुवाटारबाटै साझा बसमा आउँने आँट गरे त्यसले केही अर्थ राख्थ्यो कि ?